वरुण तलवार महाप्रबन्धक, हायात प्लेस होटेल
२०७८ असोज २३ शनिबार ०९:०७:००
होटेल सञ्चालनको तयारी के भइरहेको छ ?
हायात प्लेस दसैँ र तिहारको बीचमा सञ्चालनमा आउँछ । अहिले हामी टेस्टिङको काम गरिरहेका छौँ । तत्काललाई होटेलको सफ्ट लन्चिङ हुन्छ । सरकारको गाइडलाइन पालना गरेर रेस्टुरेन्ट चलाउँछौँ । हामी तत्काल तीन तला मात्र सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । बिस्तारै फुल अपरेसनमा जानेछौँ ।
कोभिडले विश्वभरिकै पर्यटन ठप्प छ । यही वेला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, सुरुमा कत्तिको बिजनेसको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
अहिले हामी होटेल सफ्ट लन्च गर्छौँ । अहिलेकोे अवस्थामा तत्काल ठूलो बिजनेसको अपेक्षा गरेको छैन । अरू होटेलको अवस्था पनि त्यही होला । अपेक्षा गरौँ, अहिलेको अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ । पर्यटक आउन थाल्नेछन् । नेपाल सरकारले पनि कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा खुला गरिसकेको छ । उनीहरू क्वारेन्टिन पनि बस्नुपर्दैन । यो व्यवस्थाले पनि मार्केटमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्तै, कोभिडमा इन्डियाका धेरै उडान कटौती गरिएको थियो । अहिले उडानहरू पनि थपिँदै गइरहेका छन् । इन्डियामा उडान थपिनेबित्तिकै त्यहाँबाट पर्यटक आउन थाल्नेछन् । र, पर्यटन बजार बिस्तारै लयमा फर्किन थाल्नेछ ।
अहिले नेपालमा होटेलको बाढी आइरहेको छ । यो भिडमा अलग पहिचान बनाउन तपाईंहरूको हस्पिटालिटी कस्तो हुन्छ ?
हायात प्लेसमा एक सय ५३ कोठाहरू छन् । सातवटा टेरेस गार्डेनसहितका रुमहरू पनि छन् । होटेलका आधा कोठाबाट स्वयम्भूनाथ मन्दिर देख्न सकिन्छ । दुई तलामाथि स्विमिङ पुल छ, छेवैमा ओपन रेस्टुरेन्ट एन्ड बार हुन्छ । त्यहाँ हामीले फरक खालको माहोल क्रिएट गर्न खोजेका छौँ । हाम्रो होटेलका सबै कर्मचारी योङ र फ्रेन्ड्ली छन् । उनीहरूले राम्रो सर्भिस दिन कन्जुस्याइँ गर्नेछैनन् । हामी क्विक सर्भिस उपलब्ध गराउँछौँ ।
‘हायात प्लेस’ कस्तो ब्रान्ड हो ?
बहुराष्ट्रिय कम्पनी हायात इन्टरनेसनलका डेढ दर्जन होटेल ब्रान्ड छन्, जसमध्ये एउटा हो, हायात प्लेस । यो ब्रान्डले विश्वभरि होटेल सञ्चालन गर्छ । विश्वव्यापी कुरा गर्दा हायात प्लेस सेलेक्ट सर्भिस ब्रान्ड हो । नेपालमा पाँचतारे होटेल व्यवस्थापन गर्दै छौँ । इन्डियामा पनि हायात प्लेस फुल सर्भिस ब्रान्ड हो । हायात आफँैमा स्थापित ब्रान्ड हो । यो कम्पनीका डेढ दर्जन ब्रान्डले विश्वभरि लक्जरी होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्छन् ।
नेपालमा पर्यटनको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि सन् २०१९ पर्यटनका लागि ‘गोल्डेन डेज’ थियो । कोभिडले विश्वभरिकै पर्यटन सुस्ताएको छ । नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक आएका छैनन् । कोभिडले २०२० र २०२१ यत्तिकै बित्ने भयो । यो वर्षको अक्टोबरदेखि नेपाली पर्यटनमा केही सकारात्मक भाइभ देखिन थालेको छ । अब, सन् २०२२ देखि पर्यटन रिबाउन्ड हुने सम्भावना छ । सन् २०२३ देखि पर्यटन लयमा फर्किन थाल्नेछ । त्यो वर्षदेखि गोल्डेज डेज सुरु हुन सक्छ ।
कांग्रेसका तीन पक्ष (अन्तर्वार्ता)
मिडियामा दिएका अन्तर्वार्तालगायतका कारण महाभियोगका लागि काफी छन् : सांसद बिडारी